၂၄.၀၉.၂၀၁၇၊တနင်္ဂနွေနေ့၊နေ့လည်(၁၂:၀၀)နာရီတိတိအချိန်တွင်၊Frankfurt မြို့၊Gallus Saalbau ၌၊မြန်မာ့လူမှုရေးကူညီမှုအသင်းအမှုဆောင်တချို့ နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာပရဟိတလုပ်ငန်းစဉ်များကိုစိတ်ပါဝင်စားသူညီအကိုမောင်နှမများတွေ့ဆုံကြ၍နောင်အနာဂတ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စုစည်းညီညွတ်သောအသင်း၊အားသစ်အင်သစ်များဖြင့်လူဟောင်းလူသစ်ခွဲမပြစ်ဘဲအပြန်အလှန်နားလည်ယုံကြည်မှုများဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့စည်ပင်ဖွံ့ ဖြိုးအားမာန်တိုးနေသောအသင်းတသင်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းရပ်တည်သွားနိုင်ရန်အလို့ဌာ(လက်ရှိပကတိအခြေအနေအရမိမိတို့အမျိုးသားအရေးကိစ္စအတွက်သမိုင်းကပေးလာသောတာဝန်အရ)အောက်ပါညီအကိုမောင်နှမများဖြင့်ပဏာမစတင်ဖွဲ့စည်းကြရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
ထိုမှတဖန်(၂၂.၁၀.၂၀၁၇၊တနင်္ဂနွေနေ့)၊နေ့လည်(၁၂:၀၀)အချိန်၊Gutleut Saalbau ၌အဆိုပါပဏာမပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ဝင်များထဲမှသော်၎င်း၊ထိုနေ့တွင်ထပ်လောင်း၍တက်ရောက်လာသောစိတ်ပါဝင်စားသူညီအကိုမောင်နှမများထဲမှသော်၎င်း၊တရားဝင်မှတ်ပုံတင်မည့်အမှုဆောင်(၃-၅)ဦးကိုအများသဘောဆန္ဒဖြင့်ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
Icesport Halle ပန်းခြံကစားကွင်းမှာ စုပေါင်းအသားကင် 09.09.2017 စနေနေ့ 
All you can eat free Buffet Grill Party in Frankfurt
၉.၉.၂၀၁၇ စနေနေ့ မနက် ၉ မှ ည ၈ အထိ
Germany ရှိ ညီအကိုမောင်နှမ များအားနွေရာသီအကုန် Free buffet Grill Party သို့လာရောက် စာသုံးနိုင် ရန် ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်< 9.9.2017 ရက် စနေ့ နေ့ icesport halle အသားကင်ကွင်းတွင် ကျင်းပပါမည်။ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စားသောက်စရာ များကိုလည်း ယူဆောင် လာနိုင်ပ်ါတယ် ။ကျေဇူးပြုပြီး အခင်းများရှိရင်ယူခဲ့ပေးကြပါ 😁
Grill Sponsor by ကိုဘုန်းနိုင် ၊ ကိုစိုးသီဟ ၊ ကိုထက်ပြည့် ၊ကိုဖြူခိုင် ၊
ရခိုင်ပြည်နယ် နေအိမ်စွန့် ခွါနေသူများ အတွက် တတ်နိုင်သလောက် နည်းသည်များသည် သဘော မထားဘဲ အကင်ပွဲနှင့် ပြင်ပတွင်လည်း ပါဝင်လှူဒါန်း နိုင်ပါသည်။
ကိုfamous ............... 0162 9029534
ကိုဘုန်းနိုင်-ကိုမင်း ……. 0163 1339319‬‬
ကိုစိုးသီဟ ................ 0176 24863832
ကိုထက်ပြည့် ............... 0176 82327596
ကိုဖြူခိုင် ................. 0162 8200566
ကိုကျော်ဆွေ ............... 0176 24537939
ကိုဖြိုး ....................... 0162 1039166
ကိုလှမြင်စိုး ................. 0157 54277786
ကိုမင်းဦး .................... 01731535014
ကိုစိုးခင် ..................... 0178 6362872
ရခိုင်ပြည်နယ် နေရပ်စွန့် ခွာသူမျာကိုလှူဒါန်းရန် အတွက် အလှူရှင် များ
1.ကိုfamous မိသားစု ----- 50 €
2.ကိုထက်ပြည့် မိသားစု ----- 100 €
3.ကိုဖြူခိုင် ----- 50 €
4.ကိုမင်းဦးမိသားစု ----- 50€
5.ကိုဘုန်းနိုင် ----- 20€
6.ကိုဝင်းထွဠ်+ မခင်ညိုလွင် မိသားစု ----- 20€
7.ကိုကလို + မနော်မူမူအေး မိသားစု ----- 20€
8.ကိုရဲလွင် ----- 20€
9.ကိုစိန်မြင့် မိသားစု ----- 20€
10.ကိုလူဇော် ----- 10 €
11.မနွဲ့ယဉ်ယဉ် မိသားစု ----- 10€
12.မစံပယ် ----- 50€
13.ဦးလှစု + ဒေါ်စိုးစိုးသိန်းမိသားစု ------20€
22.ကိုစောကျော်သက် +မဥမ္မာ မိသားစု Mummy Sushi------50€
အတာသင်္ကြန် ၂၀၁၇ ဈေးရောင်းပွဲတော်နှင့် အမှတ်တရပုံရိပ်များ
အတာသင်္ကြန် ၂၀၁၇တွင် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများ
ကိုကြည်ဝင်း မိသားစု၊ ကိုမင်းဦးနှင့် မပြုံး နှင့် ဆွမ်းအလှူရှင်များအား၎င်း၊ အတာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွင် အဆိုအကများအတွက်အစီအစဉ်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွှက်ပေးသော ကိုသိန်းထွေးအား၎င်း၊ ဓါတ်ပုံများအားရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ပေးသော ကိုကြည်လင်းအား၎င်း၊ အတာပွဲသို့ လာရောက် ကြသူများကိုအစားအသောက်များကူညီရောင်းချပေးသော မတင်တင်ဝင်း မိသားစုနှင့် မရိုဇာ တို့ အား လူမှုရေးအသင်းမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်သို့ လာရောက်အားပေးကြသော မြန်မာမိတ်ဆွေများနှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်
မလာရောက်နိုင်သော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ လာမည့်နှစ်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးလာရောက်အားပေးကြပါရန်
အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်း ရရှိသောအလှူငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်..
၄.အလှူရှင်တစ်ဦးမှ အလှူငွေ ၂၀ယူရို
စုစုပေါင်းရရှိငွေ ... 1463ယူရို
ကချင်ပြည်နယ်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကြောင့် အပြစ်မဲ့စစ်ဘေးဒဏ်ခံနေကြရသော တိုင်းရင်သားညီအစ်ကိုမောင်နှမများကိုကူညီရန်ရည်ရွယ်၍ ဂျာမနီရောက်ကချင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများစုပေါင်း၍ ရံပုံငွေဈေးရောင်းပွဲတော်ကို 05.02.2017ရက်နေ့Enkheim Saalbau ခန်းမဆောင်တွင်ကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိလာသော ရံပုံငွေများကို စစ်ဘေးသင့်နေကြသော တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများ
ထံသို့ ပေးပို့ လှူဒါန်းသွားပါမည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ဂျာမနီရောက် မြန်မာမိသားစုညီအစ်ကိုမောင်နှမများ လာရောက်အားပေးကြပါရန်နှင့်နွေးထွေးစွာဖြင့် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
လူမှုရေးအသင်း၏ အထွေထွေသုံးရံပုံငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်..
အသင်း၏အထွေထွေရံပုံငွေများရရှိရေး အတွက်အသင်းအမှုဆောင်များမှ ရံပုံငွေ ပွဲများပြုလုပ်၍ ရရှိသောငွေများဖြစ်ပါသည်..
၁.ကိုမင်းဦး၊ မပြုံး ...၅၀ယူရို
၇.ကိုကြည်ဝင်း မိသာစု... ၅၀ယူရို
၁၀.ကိုဂျက်ကီမိသားစု (Hama Sushi) ၁၀၀ယူရို
၁၁.ကိုမင်းဦး. ကိုစိန်မြင့် (Nigiri Sushi ) ၁၀၀ယူရို
၁၄.မမာ မိသားစု ၃၀၀ယူရို
၁၅.မနွယ် သားကိုဇင် ၁၃၀ယူရို
၁၇.ကိုထင်အောင်မြင့် မအိ မိသာစု ၁၁၃ယူရို
၁၈.ဒေါ်စိုးစိုးသိန်း မိသားစု ၇၀ယူရို
၂.ကားခ. ဆီဖိုး. အအေး. ရေး. ဈေး...၂၆၆ယူရို
လက်ရှိလူမှုရေးအသင်း၏ အထွေထွေရံပုံငွေ....၆၃၆ယူရို ဖြစ်ပါသည်..
၄င်းလက်ရှိ အထွေထွေရံပံငွေများကို ငွေတာဝန်ခံ မစုလေးနွယ်မှလက်ခံရရှိထားပါသည်..
ဘဏ်မှ လက်ရှိ အလှူ ရှင်ငွေများကိုလည်း ထပ်မံဖေါ်ပြပေးပါဦးမည်...
Icesport Halle ပန်းခြံကစားကွင်းမှာ စုပေါင်းအသားကင် 15.05.2016 , Sunday
Ice Sport Halle ပန်းခြံကစားကွင်းတွင် လူမှုရေးအသင်းသူအသင်းသားများနှင့် မြန်မာမိသားစုများ စုပေါင်းအသားကင် ပွဲနှင့် ကလေးများပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအစီအစဉ်များပြုလုပ်ကြပါမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဂျာမနီရောက် မြန်မာမိသားစု ညီအကိုမောင်နှမများ နှင့် အတာသင်္ကြန်တွင် အဆိုအက၊ ငွေကြေးနှင့် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်အားပေးခဲံ့ကြသော မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများ အားလုံးလာရောက်အားပေးကြပါရန် ခင်မင်စွာဖိတ်ခေါ်ပါသည်...
လာရောက်အားပေးကြသော ညီအကိုမောင်နှမများမှ မိမိတို့ နှစ်သက်ရာအစားသောက်များ ကိုလည်း ယူဆောင်လာနိုင်ပါသည်...
အတွက် အလှူများကိုလည်း မိမိတို့ တတ်အားသမျှနည်းများမဆို စုပေါင်းပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်းထပ်မံ
နှိုးဆော် အပ်ပါသည်..
၂၃. မရိုဇာ ....၁၀၀ယူရို
အသားကင်မည့်နေ့Sunday , Afternoon , 15.05.2016.
မှတ်ချက်.....ရာသီဥတု အခြေနေအရ ရက်ပြောင်းရမည်ဆိုလျှင် လာရောက်အားပေးကြမည့်ညီကိုမောင်နှမများကို ၁ပါတ်ကြိုတင်ပြီး အကြောင်းကြားပါမည်...
ကိုဖုန်းနိုင် .. 015215666033
Labels: Frankfurt အထွေထွေ, လူမှုရေး
မြန်မာလူမှုရေးအသင်း(ဂျာမနီ): ၂၀၁၆ ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော် စည်းကားသိုက်မြိုက်စြွာ...
မြန်မာလူမှုရေးအသင်း(ဂျာမနီ): ၂၀၁၆ ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော် စည်းကားသိုက်မြိုက်စြွာ...: ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော် ကို ၁၀.၀၄.၂၀၁၆ ရက်နေ့ တွင်စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။ အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်စည်းကားစွာ ဖြစ်မြောက်ရေး...
၂၀၁၆ ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော် မှ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများ
ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော် ကို ၁၀.၀၄.၂၀၁၆ ရက်နေ့ တွင်စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။ အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်စည်းကားစွာ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လုပ်အားဖြစ်၎င်း၊ အကြံဥာဏ်အားဖြစ်၎င်း၊
ငွေအားဖြစ်၎င်း၊ မိမိတို့ တတ်ကျွမ်းသော နုပညာဖြစ်၎င်း၊ ပါဝင်ခဲ့ကြသော အောက်ပါ ညီအစ်ကို မောင်နှမ
များကို လူမှုရေးအသင်း(ဂျာမနီ)မှ အထူးကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
၁. လူမှုရေးအသင်းကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးသော အရှင်သောပါက အား၎င်း
၂. မြန်မာ့ရိုးရာအကများဖြစ် ဖျော်ဖြေပေးခဲ့သော ကိုဗလ (ဘာလင်) အား၎င်း
၃. ရုပ်သေးအကဖြစ်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့သော ဒေါ်နီနီရင် ( Munich) အား၎င်း
၄.သယော်လက်သံဖြစ် ဖျော်ဖြေပေးခဲ့သော ကိုစိုင်းလီ အား၎င်း
၅. အတာဖွင့်အက နှင့်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့သော မမြတ်နိုးအား၎င်း
၆.ကချင်ရိုးရာ အကဖြစ်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့သော ကချင်လူမှုရေးအဖွဲ့(ဂျာမနီ) အား၎င်း
၇.အတာယိမ်းအကများဖြစ် ဖျော်ဖြေပေးခဲ့သော သမီးငယ်လေးများအား၎င်း
၈.အစီအစဉ်များကို ကြော်ငြာ်ပေးသော ကိုကျော်ဆွေညွန့် နှင့် မစပါယ်လွင် တို့ အား၎င်း
၉.အစားအသောက်များ ရောင်းချပေးကြသော ဒေါ်စိုးစိုးသိန်းမိသားစု ၊ မနွယ် နှင့် သားကိုဇင် ၊ မမာ မိသားစုနှင့် ညီကိုမောင်နှမသူငယ်ချင်းများ ၊ မအိ မိသားစု ၊ မဥမ္မာ မိသားစု တို့ အား၎င်း
၁၀. ပန်းကုံးများရောင်းချပေးသော မစုမြတ်ယမုန်းဝင်း အား၎င်း
၁၁.အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို အဝေးမှ လာရောက် အားပေးကြသော ညီအစ်ကို မောင်နှမများနှင့် မြို့ ခံ
၄င်းအတာပွဲတော်တွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မှားယွင်းချွတ်ချောမှုများရှိခဲ့လျှင် လူမှုရေးအသင်းမှ
တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ အပြုသဘောဆောင်သော အကြံဥာဏ်များကိုလဲ လက်ခံဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
အတာသင်္ကြန်ဖြစ်မြောက်ရေး ရံပုံငွေ နှင့် မိဘမဲ့ကလေးများအတွက် စေတနာရှင်အလှူရှင်များ
ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ၁၀.၀၄.၂၀၁၆ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဖရန်ဖတ်မြို့ တွင် စည်းကားသိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာလူမှုရေးအသင်းသူအသင်းသားများနှင့် အတာသင်္ကြန်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီတို့ မှ စုပေါင်း၍ သင်္ကြန် ပွဲတော်ကို၊ ၁၀.၀၄.၂၀၁၆ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဖရန်ဖတ်မြို့၊ Borsigallee 40, 60388, Ffm, Saalbau GPS ခန်းမတွင်စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ၊ ကျင်းပပြု လုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်စည်းကားသိုက်မြိုက် စွာအောင်မြင်နိုင် ရန်အတွက် ၊ မြန်မာညီအစ်ကိုမောင်နှမများမှ မိမိတို့ တတ်နိုင်သောနေရာများမှပါဝင်ကူညီ ပေးကြပါရန် နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုနေပါသည်။ ညီအစ် ကိုမောင်နှမများမှ အကြံဥာဏ်ကောင်းများရှိလျှင်၊ အတာသင်္ကြန်စီ စဉ်သူများကို ၊ ဆက်သွယ်အကြံပေး ကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဤတာသင်္ကြန်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်များထင်ပာပ်ပေါ်လွင်စေရန်ရည်ရွှယ်ချက်ဖြင့်၊ တိုင်းရင်း သားရိုးရာ အဆိုအက များကို အစီအစဉ် တစ်ခုအနေဖြင့်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ တိုင်းရင်းသားညီ အစ်ကိုမောင်နှမများမှ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ အုပ်စုအလိုက်ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့ ၏ အဆိုအက များဖြင့် ပါဝင်ဖျော်ဖြေပေး စေလိုပါကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေများကို၊ လေးစားစွာဖြင့်၊ ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။ မိမိတို့ ၏ အတာရိုရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာများကို၊ ပြသနိုင်ရန်အတွက် ၊မိမိတို့ နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီး ကြသော နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေများကိုလဲဖိတ်ခေါ်လာနိုင်ပါသည်။
၂.အတာယိမ် (လူငယ်၊ လူရွှယ်၊ လူကြီး)
၃. ကိုဗလရဲ့တပင်တိုင်အက
(တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများမှ မိမိတို့ ၏ရိုးရာအဆိုအကများကို၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ အုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေ ပါဝင်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။
ကိုအောင်နိုင်ထွေး 015755948966, 06990753529
ကိုဖုန်းနိုင် 015757158368, 01575289655,015215666033
ကိုမင်းဦး၊ မပြုံး ...၅၀ယူရို
ကိုကြည်ဝင်း မိသာစု... ၅၀ယူရို
အတာသင်္ကြန်သံချပ်တွင်၊ ပါဝင်ဖျော်ဖြေကြမည့် ၀ါသနာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်များမှ၊ အထက်ပါစီစဉ်ကြမည့်
ညီအစ်ကိုများကို၊ ဆက်သွယ်၍ပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးကြပါရန်၊ ခင်မင်စွာဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ များမှ မိမိတို့ အုပ်စုအလိုက် သီးသန့် ပါဝင်ဖျော်ဖြေကြမည်ဆိုလျှင်လည်း၊ ပါဝင်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။
မြန်မာမုန့် ပာင်းခါး၊ ဆမူဆာသုတ်
အသုတ်စုံ ၊ အစုံသုတ်
အအေး၊ဘီယာ၊ Coffee နှင့်Tea
အတာသင်္ကြန်ဖျော်ဖြေရေး Play back အစီအစဉ်
အတာသင်္ကြန် မှာဖျော်ဖြေရေးအပိုင်းတွင် တေးဆိုကြမည့် ညီအစ်ကိုမောင်နှ မများကို နွေးထွေး စွာကြိုဆိုနေပါသည်။ တေးဆိုကြမည့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများမှအောက်ပါစီစဉ် သူများကိုဆက် သွယ်၍ ဆိုကြမည့် သီချင်းများကို ကြိုတင်ပေးထားနိုင်ပါသည်။